Taariikhda Sir Alex Ferguson Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United, Sir Alex Ferguson, ayaa 25 sano ay u buuxsantay inta uu tababaraha u ahaa kooxdan.
Waxaa lagu tilmaamay tababaraha ugu mudada dheeraa ee soo mara taariikhda kooxdan.
Cabdirisaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa warbixintan ka diyaariyay taariikhdan kooban, Sir Alex Ferguson:
Markaad eegto dadka noqda taba-bare kubadda cagta, marka aad u fiirsato culleyska saaran in ey guulo keenaan, waxaa muuqata in sannad ama laba aaney dhaafi karin iney kooxaha waaweyn hogaanka u hayaan.
Culeyska in ay guuleystaan waa mid kaga yimaada taageerayaasha, oo taa ay u dheer tahay guusha ay doonayaan kuwii kooxdaa maal gashadey. In tababarayaashu ay hal sano ku cirreystaan kuna gaboobaan waa wax joogto loo arko.
Taariikhda Sir Alex Ferguson
In aad dhowr sano bad-baadaa waa mid dhici karata, laakiin 25 sano oo aad maamusho mid ka mida kooxaha ugu caansan, uguna waa weyn, uguna xoolo badani waa mid mucjiso ah.
Taa waxa todobaadkan gaadhey Sir. Alex Ferguson, oo 25 sano maamulayey Kooxda Manchester United.
Inteynaan u gelin,hadaba, guulaha uu gaadhey iyo sida looga danbeeyo, loogana xushmeeyo masraxyada cayaarta kubadda cagta, aan wax ka ogaano Sir Alex.
Alex Ferguson waxa uu ka dhashey reer sabool ah. Waxa uu ku dhashey degmada Govan ee Glasgow (Scotland) Dec 1941. Waxa oo yaraantiisii ka shaqeeyey sida ay u badnaayeen dadka Govan dhismaha marakiibta.
Muddo gaaban, ayuu kubadda cayaarey oo guulo kama keenin.
Dabeed, waxa uu tababare u noqdey kooxaha East-Sterlingshire iyo St. Mirren oo midna aanu guulo u soo hoyn.
Guulaha uu gaaray
Guushiisii ugu horeysey waxa ay aheyd markii uu tababarayay kooxda Aberdeen ee gobolka Scotland, oo qaadatey koobabka Yurub mid ka mida sanadihii 1982-83 markii ay ka adkaatay si lama filaan ah kooxda Bayern Munich.
Waxa uu ku soo biirey Manchester United 1986, oo taba-bare uu ka noqdey garoonka Old Trafford.
Waxa uu ku guulestay horyaalka yurub laba jeer oo kan hore ay aheyd 1993-94. Labadaa jeerna waxa kale oo Manchester United ay ku guuleysatey horyaalka England iyo kan koobka English FA.
Man U, waxaa ay heshay in ka badan 30 koob intii Sir Alex uu hogaanka u hayey.
Waxa boqradu ay siisay darajada xushmadda ee 'Sir' sanadku markuu ahaa 1999kii.
Sir Alex waxaa uu sheegay in aanu weli diyaar u aheyn in uu howl gab noqdo.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsne Wenger, oo aad labada kooxood uu loolan uga dhaxeeyo, ayaa sheegey in aan dib loo arki doonin Alex Ferguson oo kale, oo 25 sano soo taagnaada koox, oo guulahaas oo kale keena.